Warbixn: Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta:-By Yusuf garaad – Somnews
By somnews	 On May 9, 2017
Toddobaadkan ayaan mar kale isu maray Muqdisho iyo Kigali. Muqdisho waxay yeelatay Dowlad. Waxay yeelatay kala dambeyn ilaa xad ah. Waddooyin dhowr ah ayaa la dayactiray. Waddooyinka waaweyn badankood nal ayay leeyihiin. Dhowr dhisme oo waaweyn aysan dowladdu lahayn ayaa soo baxay.
Alshabaab oo sheegtay in dagaal ay kula wareegeen deegaanka Goofgaduud Shabeelow
Ganacsatada Dagmada afgooye oo saakay aan wax canshuur ah laga qaadin kadib markii madaxweynaha uu diiday